Jehovah Adasefo Bisa Edwuma Eso Wɔnngye Akatua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chuvash Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Otomi (Mezquital Valley) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Zulu
Wobisa Edwuma Eso Wɔnngye Akatua
Bɔbor mfrenhyia 28 nye yi no, Jehovah Adasefo bɔbor 11,000 efifi hɔn efie nye hɔn man mu mpo akɔboa ma woesisi adan ahorow wɔ aman 120 do. Hɔn nyinara dze enyigye efi hɔn pɛ mu dze hɔn nyimdzee nye hɔn ahoɔdzen aboa ber nyina, a wɔanngye akatua biara.
Hɔn mu pii tuaa hɔnankasa hɔn kaar akatua dze kɔr bea a wɔrekɛyɛ edwuma no. Binom dze hɔn akwanma ber na wɔdze yɛɛ edwuma no. Binom so serɛɛ kwan wɔ edwuma mu, na iyi maa wɔhweer hɔn akatua.
Nna ɔnnyɛ nhyɛ dɛ wɔbɔbɔ dɛm afɔr ahorow yi, naaso wofi hɔn pɛ mu tuu hɔn ho mae dɛ wɔbɔboa atserɛw wiadze nyina Ahendzi asɛmpakã edwuma no mu. (Matthew 24:14) Woesisi ɔfese ahorow, mbea a wɔtsena, nye mbea ahorow a wotsintsim Bible nye Bible ho nwoma ahorow. Jehovah Adasefo esisi Ehyiadzi Asa ahorow so a ɔfa nyimpa dodow 10,000 nye Ahendzi Asa ahorow a ɔfa nyimpa dodow 300.
Dɛm dwumadzi yi da ho ara rokɔ do. Sɛ edwumayɛfo no du adansibea hɔ a, edwumayɛbea nkorbata a ɔhwɛ dɛm bea no do no ma hɔn dabew, edziban, ɔhor hɔn ndzɛmba ma hɔn, na ɔma hɔn nsa kã asetsena mu ehiadze ahorow. Adasefo a wɔbembɛn bea a edwuma no rokɔ do no so nya enyigye a ɔwɔ adansi edwuma mu no mu kyɛfã.
Mbrɛ ɔbɛyɛ na wɔayɛ dɛm edwuma kɛse yi ho nhyehyɛɛ na wɔama ho akwankyerɛ no, wɔyɛɛ amanaman ntamu nhyehyɛɛ bi wɔ afe 1985 mu. Sɛ etuhoakyɛnyi bi botum enya dɛm nhyehyɛɛ yi mu kyɛfã a, ɔsɛ dɛ ɔyɛ Jehovah Dasefo a oedzi fi mfe 19 kesi 55, na annyɛ yie koraa no onyim adansi ho nsaano edwuma kor bi. Mpɛn pii no, obi no dwumadzi wɔ nhyehyɛɛ yi mu no dzi adapɛn ebien kesi abosoom ebiasa, ɔwɔ mu, ɔtɔ ber bi a wotum twẽ mu ma odzi afe anaa dza ɔbor dɛm.
Wɔtsetse adansifo no hɔn yernom ma wɔkyekyer ndadze nkakraba, wɔtow ntayaa, wotwutwuw ndua ho, na wopenti. Binom boa ma wɔyɛ edziban a wobedzi anaa wosiesie adansifo no adan mu.
Sɛ etuhoakyɛfo yi san kɔ hɔn efie a, binom kyerɛw nkrataa dze bɛkyerɛ enyisɔ dɛ wɔtoo nsa frɛɛ hɔn ma wɔbɛyɛɛ edwuma no. Awarfo bi kyerɛɛw dɛ: “Yɛpɛ dɛ yɛda hom ase papaapa wɔ ho kwan a yenyae dze bɛyɛɛ edwuma wɔ edwumayɛbea a ɔwɔ Budapest no. Adasefo a wɔwɔ Hungary no daa ɔdɔ nye enyisɔ edzi papanara! Yedzii hɛn bosoom kor no wiei no, nna ɔyɛ dzen ma hɛn dɛ yɛbɛkã bae-bae. Naaso, nsɛ aber nyina dɛmara na ɔtse? Yɛwɔ enyisun dɛ yɛbɛsan akɔ hɔ bio wɔ nsutɔber mu. Aber biara a yebenya dɛm dwumadzi yi bi no, ɔtse dɛ ma ɔyɛ abosoom a hɛn enyi gye paa wɔ asetsena mu.”
Fa mona Fa mona Wobisa Edwuma Eso Wɔnngye Akatua
Philippines Adansi Edwuma No Ho Mfonyin 1 (February 2014 Dze Kesi May 2015)